Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbax Balaadhan oo Hada Kasocda Caasimada Wadanka Norway Ee Oslo.
Banaanbax Balaadhan oo Hada Kasocda Caasimada Wadanka Norway Ee Oslo.
Posted by ONA Admin	/ October 16, 2014
Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee ku dhaqan dalka Norway ayaa banaanbax wayn kaga hortagtay wasiirka arrimaha dibada ee Woyanaha Tedros Adhanom oo haatan kusugan caasimada wadanka Norway ee Oslo. Banaanbaxan ayaa bilowday saaka abaarihii 10:00 aroornimo. Sawiradan ayaa laqaaday subaxnimadii hore.
Jaaliyada Ogadenya waxay hortubantahay iyagoo sawaxan dheer ku dhawaaqaya wajahada hore ee guriga uu kusuganyahay wasiirka arrimaha dibada Ethiopia halkaasoo uu kasocdo kulan Woyanuhu ku raadsanayo Maalgashi lagu sameeyo Itoobiya.
Poliska ayaa amaanka aad u adkeeyay waxaana guriga shirku kasocdo iyo banaanbaxa jaaliyada Ogaden lagu kala qeybiyay Biraha waaweyn wadooyinka lagu kuhareeraysan goobta shirku kasocdo. Banaanbaxan waxaa saaka laga dareemay wadanka Norwey. “Dhiiga shacbiga somalida Ogaden kuma badalan karo taageero aan Ethiopia kahelo” waxaa sidaas ONA usheegay muwaadin kasoojeeda jamuhuriyada Somalia oo kamid ah banaanbaxyaasha. Banaanbaxa waxaan u imid inaan taageero halganka somaliyeed ee Xoriyada laguraadinayo Ogaden. Dadka shirarka Ethiopia ka qeybgala ayaan kamid ahaan jiray. Waxaa lanagu abaabuli jiray Puntland ayaa taageero kahelaysa Dowlada Ethiopia hadii qurba joogtu ka qeybqaataan maalgashiga Ethiopia. Waxaan uga digayaa umada somaaliyeed inaysan dhiiga somalida Ogaden kudoorsanin aqoonsi. yuu yiri muwaadinkan sida wanaaagsan wax u cabiray.
Wasiirka Arrimaha Dibada Ethiopia ayaa shirkan uyimid maalgashi iyo dhaqaale aruursigii caadiga u ahaan jiray Gumaysiga Itoobiya. Cimilada saaka waa mid aad u hooseysa qabow aad ubadan ayaa jira balse dadka mudaharadaya aad bay u kululyihiin cadhobadan iyo shucuur gumeysi diidnimo leh ayaa ka muuqata. Banaanbaxii wali waa sii socda.
ON A – NORWAY